Screen Size: 15.6″ FHD ရှိတဲ့ ASUS Vivobook 15 M513IA (AMD Ryzen 5) ~ The ICT.com.mm Blog
Screen Size: 15.6″ FHD ရှိတဲ့ ASUS Vivobook 15 M513IA (AMD Ryzen 5) တွေ ICT.com.mm မှာ ဝယ်ယူနိုင်ပါပြီ..
AMD Ryzen R5 4500U, 2.3GHz Processor၊ RAM: 8GB DDR4 3200 (onboard 4GB + 4GB)/ 512GB PCIe SSD G3 ဖြစ်လို့ superfast storage ပါပဲ အမျိုးတို့ရေ၊ AMD Radeon Graphic ဖြစ်သေးတော့ ဂိမ်းဆော့မလား? ပရိုဂရမ်တွေရေးမလား? ရှယ်ပဲနော်..3Cells 42 WH ဖြစ်တာကြောင့် အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုသူတွေ၊ ကျောင်းသွားရင် ယူသွားရမယ့် သူတွေနဲ့လဲ ကိုက်ညီပါတယ်နော်..
Window 10 Home OS ပါပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ Finger Print လဲပါတာဆိုတော့ security ပိုင်းအရလဲ ပြောစရာမလို၊ တစ်ချက်ထိလိုက်ရုံနဲ့ တန်းပွင့်ပဲဗျို့..
Screen Size ကြီးပြီး frame လဲသေး ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလေးနဲ့ Full HD လဲ ပေးနိုင်ပါသေးတယ်။ ဒီလို ASUS Vivobook 15 M513IA (AMD Ryzen 5) မှာ‌ ရွေးချယ်စရာအရောင်တွေက Dreamy White, Cobalt Blue နဲ့ Bespoke Black ဆိုပြီး (၃) ရောင်ရှိပါတယ်။ ခုလောလောဆယ်ကတော့ Dreamy White က လူကြိုက်များတော့ ပစ္စည်းလက်ကျန်မရှိတော့ပါဘူးရှင်.. သိပ်မကြာခင်မှာ ပစ္စည်းပြန်ဝင်ဖို့ရှိပါတယ်နော်..
ဈေးနှုန်းလေးကတော့ ASUS Vivobook 15 M513IA (AMD Ryzen 5) တစ်လုံးကို K698,280 ပါရှင်..
ဒါမျိုး လူကြိုက်များပြီး‌ ပေးရတဲ့ဈေးနဲ့တန်တဲ့ ICT.com.mm က ရောင်းပေးချင်ပါတယ်ရှင်..
For ASUS Vivobook 15 M513IA-EJ292T (AMD Ryzen 5) Bespoke Black,
For ASUS Vivobook 15 M513IA-EJ290T (AMD Ryzen 5) Cobalt Blue,
Newer MEEYI Two Way Window Intercom (MY-E330)
Older Xiaomi Redmi K30 Ultra ဖုန်းလေးတွေ